Iyo metamorphosis, iyo isina kuchena surrealism yaFranz Kafka | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Vanyori, Novela, Nyaya
Metamorphosis (Shanduko - zita rekutanga muchiGerman) ndeimwe yenyaya dzinozivikanwa nemunyori Franz Kafka. Inopa Gregorio Samsa, mutengesi wechidiki uyo akamuka rimwe zuva akashanduka kuita rudzi rwezvipembenene zvinotyisa. Zvisinei nechitarisiko chake chitsva, protagonist akaedza kudzokera kuhupenyu hwake, sezvaainzwa kumanikidzwa kuve iye oga mupi wemari yemhuri yake.
Iri ibasa rine zvese hunhu hweaya anonzi "Kafkaesque nyaya". Mavari, hunhu hukuru hwakanyudzwa mune inoshungurudza, yekumanikidza uye yekufa-yekupedzisira mamiriro. Zvakaenzana, Metamorphosis Iyo ine yakajeka autobiographical maficha nekuda kwenzira yayo kumatambudziko akadai sekuzviparadzanisa, kurambwa, claustrophobia uye kurwara.
1 Nezve munyori, Franz Kafka
1.1 Zvinyorwa zvinyorwa, maitiro uye zvinyorwa
1.2 Kutenda kuna Max Brod
1.3 Mabasa akaburitswa achiri mupenyu
2 Zvinyorwa zveThe Metamorphosis
2.1 Iko kushandurwa
2.2 Kuramba kuchinja
3.1 Iyo Yakajeka Meseji muThe Metamorphosis
Nezve munyori, Franz Kafka
Franz Kafka akaberekwa muna Chikunguru 3, 1883, muPrague, mumhuri yakapfuma yevaJudha vashoma vanotaura chiGerman. Vaviri vehama dzake vakuru vakashaya achiri mudiki. Akagara hupenyu hwake hwese nemhuri yake, achive pedyo nehanzvadzi dzake Elli, Valli naOtla. Haana kumbobvira aroora, kunyangwe aive akavimbiswa kaviri.
Akadzidza zvemutemo paYunivhesiti yePrague uye akashandira kambani yeinishuwarenzi yeruzhinji pakati pa1908 na1917. Aifanira kusiya basa nekuda kwechirwere chetibhii. Mushure mekuyedza kaviri kudzoka padyo neLake Parda uye muMeramo, aifanirwa kupinda muchipatara cheKierling (Austria) muna 1920. Ikoko akafira musi wa3 Chikumi 1924.
Zvinyorwa zvinyorwa, maitiro uye zvinyorwa
Anonyanya kuita zvekunyora aive Henrik Ibsen, Baruch Spinoza, Nietzsche, Søren Kierkegaard, Gustave Flaubert, Friedrich Hebbel, naAdalbert Stifter. Saizvozvowo, Franz Kafka anoonekwa seanotaura uye munyori wezve surrealist. Nhau dzake dzinoratidza musanganiswa wakasangana wekusanzwisisika, zvakasikwa, kunyepedzera uye chokwadi, pakati penzvimbo inonamira, ine dutu uye mweya.
Zvakare, basa raKafka rakaongororwa panguva yemagariro eCzechoslovakia nekuda kwenhaka yake yechiHebheru, Akatozonzi "reactionary". Sekureva kwaMax Brod (munyori wenhoroondo uye shamwari), nharo dzaKafka dzakazara nezviitiko zvehupenyu. Naizvozvo, kurambwa kwababa, marongero ebasa, avo rudo, kusurukirwa uye kurwara, ndiwo misoro yakajairika.
Kutenda kuna Max Brod
Franz Kafka akakumbira Max Brod kuti aparadze zvinyorwa zvake zvese mushure mekufa kwake. Nekudaro, Brod akaita zvinopesana, akavaburitsa. Pakati pekutanga mazita ekupedzisira afa Iyo nzira (1925), Nhare (1926) uye America (1927). Nemukurumbira wakawanikwa, veruzhinji vakatanga kufarira mamwe mabasa aKafka.
Gare gare, vakaoneka The chinese wall (1931), Diaries (1937), Tsamba kuna Milena (1952) uye Tsamba kuna Felice (1957). Nhasi, anoonekwa semumwe wevanyori vane hunyanzvi mumabhuku echiGerman, pamwe neumwe wevanyori vane hunyanzvi uye vane hunyanzvi vezana ramakore rechiXNUMX. Uye hongu, semamwe akawanda ma greats, kuzivikanwa kwakauya mushure mekufa kwake.
Mabasa akaburitswa achiri mupenyu
Kufungisisa (Betrachtung, 1913).
Mutongo (Das urteiIni, 1913).
Metamorphosis (Shanduko, 1916).
Tsamba kuna baba (Pfupisa den den Vater, 1919).
Mukoloni yechirango (In der Strafkolonie, 1919).
Chiremba wekumaruwa (Ein Landarzt, 1919).
Nyanzvi ye nzara (munhu Hungerküsntler, 1924).
Zvinyorwa zve Metamorphosis
Unogona kutenga bhuku pano: Metamorphosis
Iyo nyaya inotanga neyakagadziriswa yaGregorio Samsa, mutengesi mufambi, kupinda mune chikara chinoratidzika kunge jongwe nebete. Aida kudzokera kumabasa ake ezuva nezuva nekukurumidza. Asi iye nekukurumidza akanzwisisa kuti iye kutanga aifanira kudzidza kufamba-famba nechitarisiko chake chitsva uye nezvinhu zvaaifarira kudya.
Atarisana nemamiriro asingatarisirwe, hanzvadzi yake akazvipa mutoro wekumupa chikafu nekuchenesa imba yake. Mazuva zvaakafamba, Gregorio akanzwa kuwedzera kuparadzana nemhuri yake uye hunhu hwake hwakachinja. Aive akasununguka kuvanda pasi pechairchair uye ainakidzwa nekuteerera kutaurirana mukamuri rakabatana.
Nhengo dzemhuri yeSamsa dzaive dzisina kugadzikana mune yavo nyowani mamiriro, nekuti Gregorio ndiye chete rutsigiro rwemari. Nekuda kweizvozvo, vakamanikidzwa kudzikisira pamubhadharo wavo uye kupa musikana wepamba basa shoma. Hanzvadzi yake - nekugutsikana kwababa vake, avo vakanzvenga dambudziko uye vakarambidza mai vake kuti vamuone - vakatanga kusaitira hanya Gregorio.
VaSamsa vakamanikidzwa kutsvaga dzimwe nzira dzekuzviriritira uye vakatambira maroja matatu mumba mavo. Asi zano harina kushanda nekuti rimwe zuva Gregorio akasiya mukamuri rake achinyengerwa nemutinhimira wevhayinini yakaridzwa nasisi vake kune vashanyi. Ava, pavakaona chikara chakatiza panzvimbo vasina kubhadhara kana kobiri zvaro.
Sezvineiwo, vese Gregorio nemhuri yake vakafunga kuti mhinduro yakanakisa yaive yekutsakatika kwechikara. Naizvozvo, Gregorio akazvivharira mukamuri rake; musikana akamuwana afa zuva raitevera. Kunyangwe nhengo dzemhuri yake dzakanzwa kusuruvara, pfungwa yekusunungurwa yaive yakakura kwazvo. Pekupedzisira, iyo Samsa yakafunga kubuda ndokutanga hupenyu hutsva.
Rufu rwaGregorio rwakakonzerwa nezviitiko zviviri. Kutanga, Gregorio akanzwa nzira yaanozvidzwa nayo nedzimwe hama dzake uye nemusikana webasa. Ipapo, protagonist yakanyura mukushushikana kwakadzika, anga asisade kuramba achirarama. Chechipiri, baba vake vakakanda apuro kumusana pavakaratidza muimba yekudyira.
Izvo zvakasara zvemuchero zvakaora uye zvakabata hutachiona hwakashata hwemuviri waGregorio. Pamusoro pezvo, hapana munhu aida kumuchengeta. Naizvozvo, kufa ndiko chete kwaigona kuguma. Nenzira iyi, Kafka anofumura madingindira akasiyana maererano nehunhu, hunhu, hutsinye uye mukana wehunhu.
Mishumo isina kujeka mu Metamorphosis
Kafka anofumura zvakajeka kuti nzanga inoshungurudza sei vanhu vakasiyana nevamwe vese. Izvo hazvina basa kana vari vanhu vanobatsira kumhuri yako uye nharaunda yako, hazvina basa kuti ivo vashandi vekubatana. Hunhu hwese uhwu hunokosheswa naGregorio, uyo pfungwa yake yebasa inomukurudzira kuti anyanye kutarisira vadikani vake (kunyangwe kana mamiriro avo asina kugadzikana).
Kunyangwe protagonist inofungidzira kubhadhara kwezvikwereti zvinogadzirwa nemararamiro evabereki vake. Nekudaro - mune inoshamisa show yekusafunga - iyo Samsa haina kana kana kadiki tsitsi pakatarisana neshanduko yaGregorio. Asi, vanonyunyuta nezvekushanda.
Munyori anobvunza zvakadzama kuti kana paine hunhu uhwo hunotiratidza se "vanhu" uye izvo zvinoita kuti tisiyane nemhuka, uye inosiya kumberi kuti, zvirokwazvo, tinorarama zvinoenderana nezvatinoda isu. Chinyorwa ichi chinongozvipa kumazana edudziro, zvisinei, zviri pachena kuti zvinofumura manyepo mazhinji munharaunda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Metamorphosis
Tsananguro yakanaka kwazvo yebhuku iri, ndinokurudzirwa zvikuru kuriverenga. Kafka agara ari mumwe wevanyori vandinodisisa kubvira pandakaverenga Iyo Process neAmerica, irombo rakanaka kuverengera Brod kuti achengetedze nhaka yake yekunyora iri mhenyu.
Basil Rathbone's Sherlock Holmes uye yake firimu inoenderana